Nalalka cagaaran ee EU-da COVID baasaboor tallaal - oo leh keyd
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Nalalka cagaaran ee EU-da COVID baasaboor tallaal - oo leh keyd
Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • France Breaking News • Jarmalka Jebinta Wararka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Investments • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Baasaboorka tallaalka ee COVID
Kaarka ku xiran tallaalka: waa ujeedo guud laakiin way adagtahay in la hirgeliyo illaa tallaallo laga helo qof walba.
Madaxa Guddiga Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku adkaysatay muhiimada ay leedahay "horumarinta habka Yurub" ee nidaamka baasaboorka tallaalka.
"Amarka siyaasadeed ayaa ah in la helo baasaboorka dijitaalka ah 3-da bilood ee soo socota gudaheeda," ayay tiri ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel.
Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, oo la kulmi doona toddobaadka soo socda xubnaha dawladda si loo diyaariyo “kaarka caafimaadka”.
Baasaboorka tallaalka 'COVID' - arrintu waa caan oo waa, marka laga reebo inta kale, waxay ku taal bartamaha doodda Yurub. Waxay ka wada hadleen intii lagu jiray Golaha Yurub: "Dardaaranka siyaasadeed waa in la heysto baasaboorka dijitaalka ah saddexda bilood ee soo socda," ayay tiri Angela Merkel, oo ka jawaabeysa su'aal ahayd goorta ay tahay in baasaboorada tallaalku ay ku diyaar noqdaan Jarmalka iyo Yurub.
Qof kastaa wuxuu jeclaan lahaa inuu u diyaariyo xagaaga sababo dalxiis oo muuqda. "Qof kastaa wuu oggol yahay waxaan u baahannahay dukumiinti dijitaal ah oo caddeynaysa tallaalka" ayuu sii waday Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka iyo in ay "la jaan qaadi karto" waddamada kala duwan ee Yurub.
"Waxaan fileynaa inay diyaar u noqdaan xagaaga" laakiin ma dhici doonto inaanan safri karin la'aantood, ayay raacisay: "Go'aan siyaasadeed oo arrintan ku saabsan lama gaarin." Sidoo kale, maxaa yeelay carruurta, tusaale ahaan, weli ma noqon karaan laga tallaalay COVID.
Madaxa Gudiga Midowga Yurub Ursula von der Leyen waxay ku adkaysatay muhiimada ay leedahay "horumarinta habka Yurub" ee ku wajahan baasaboorka tallaalka nidaamka.
"Haddii aynaan guuleysan, dadaallada laba geesoodka ah" ee Dowladaha Xubnaha ka ah "waxay abuuri doonaan xitaa dhibaatooyin intaas ka sii badan" xitaa shirkadaha waaweyn sida "Google iyo Apple waxay diyaar u yihiin inay xalka u fidiyaan WHO," laakiin waxay ku saabsan tahay wadaagista macluumaadka qarsoodiga ah. markaa waxaan rabnaa inaan si cad u nidhaahno waxaan bixinaa xalka yurub, ayay ka digtay von der Leyen.
Brussels waxay sii wadi doontaa wadahadalka ay la leedahay dowladaha si “horumar looga gaaro jihadaan marka la gaaro Maarso” ayuu sii raaciyay hogaamiyaha Midowga Yurub, isagoo hoosta ka xariiqay in “dooda waa inay tixgelisaa halista midab takoorka” iyo, isla mar ahaantaana, xaqiiqda ah “in badan oo ka mid ah wadamada EU ,… Dalxiisku aad ayuu muhiim ugu yahay xaga dhaqaalaha iyo bulshada.
Ma safri doonnaa oo keliya tallaalka ka dib?
Xaqiiqdii maahan. Tan waxaa sidoo kale cadeeyay Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, oo isbuuca soo socda la kulmi doona xubnaha dowladda si loo diyaariyo "caafimaadka," oo aan noqon doonin "baasaboor tallaal," iyadoo la tixgelinayo dib u furista goobaha dhaqanka. iyo makhaayadihii oo la xiray intii uu socday cudurka faafa ee COVID-19.
Abuuritaanka aaladdan cusub "waxay keeneysaa su'aalo farsamo oo badan oo ku saabsan ixtiraamka xogta shaqsiga, abaabulka xorriyadeenna" ayuu yiri Macron, tanna "waa inaan hadda wixii ka dambeeya u diyaarinnaa farsamo ahaan, siyaasad ahaan, sharci ahaan."
"Waxaan dareemayaa," ayuu yidhi Macron, "in jahwareer badan uu mararka qaar ka jiro arrintan" laakiin kaarka caafimaadka "kuma xirnaan doono oo keliya tallaalka" ayuu carrabka ku adkeeyay. Maaddaama "haddii aan ku guuleysanno inaan dib u furno qaar ka mid ah bogagga, ma awoodno inaan shardi uga dhigno helitaankooda tallaal, iyo waxyaabo kale, ma aanan u furin tallaal kan ugu yar."
"Waa inaan iska ilaalino," Macron ayaa yiri kadib wadahadalada maanta uu la yeeshay hogaamiyaasha 27, "in waddan kasta uu horumariyo nidaamkiisa, kana shaqeeyo shahaado caafimaad oo guud."